Mbola Misarika Ny Sain’ny Olona Ny Fandresen’i Nina Compton, Sefon’ny Nahandro St Lucian · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Febroary 2014 2:17 GMT
Sefon'ny nahandro Saint Lucian, Nina Compton, zanaka vavin'ny Praiminisitra teo aloha John Compton, no nahazo ny laharana faharoa tamin'ny lalao faha-11 amin'ilay fandaharana fahandroan-tsakafo hita mivantana amin'ny fahilavitra Top Chef. Nicholas Elmi no nandresy, saingy ny fandraisan'anjaran'i Compton no lohahevitra lehibe niadian-kevitra tao amin'ny media sosialy, indrindra tao amin'ny vondrona antserasera Saint Lucians Aiming for Progress (Saint Lucians Mikendry ny Handrosoana) .
Nikarakara fandefasana mivantana ny fifaninanana Top Chef hojeren'ny besinimaro tao amin'ny Kianjan'i Derek Walcott ao afovoan'ny renivohitry ny nosy ny vondrona. Mpanara-baovao maro no talanjona fa tsy notononina ho mpandresy i Compton, saingy niezaka izy handrombaka ny loka “Fan Favorite” (Nironan'ny Mpankasitraka) sy ny loka lelavola 10.000 dolara Amerikana izy – mariky ny fiakaran'ny fanohanana antserasera azony. Taorian'ny lanonana, notendren'ny Minisitry ny Fizahan-tany, Lorne Theophilus ho “ambasadaoron'ny nahandro” i Compton.
Nahazo fanohanana marobe tao amin'ny Twitter tamin'ny alalan'ny diezy #TeamNina, #TeamGreenFigAndSaltFish, #Team758 ary ny #NinaNation i Compton. Naneho ny tsy fahafaliany noho izy laharana faharoa ireo mpiserasera sasany tao amin'ny bilaogy-madinika, saingy ny ankamaroany kosa nitodika tany amin'ny fiarahabana azy noho ny fahombiazany:
Nisafidy olona mahay mahandro spam sy tsy maharesy lahatra tamin'ireo vehivavy roa izay nampiseho azy ireo amin'ny fahaizany mahandro ny #Topchef
Henonay ny nolazain'ireo mpitsara tamin'ny Sefo Nina na dia izany aza
Mpisera Twitter iray nilaza am-piesoesoana fa tokony nandresy i Comptom raha nanaraka ny toroheviny:
Nilaza tamin'i NINA aho hoe “pehmi sy lafarinina nandrahoina” karakaraina amin'ny tsindrin-takafo ary ataovy amin'izay fahaizany azy!
Nisioka fanohanana hoan'i Compton ihany koa ilay mpamorona lamaody avy ao Trinidad, Anya Ayoung-Chee, izay nandresy tamin'ny tetikasa fifaninanana lamaody Runway tamin'ny taona 2011:
Arahabaina i @nina_compton nandresy tao anatin'ny fo sy ny sain'ny maro! Mamirapiratra ny saina mijery ny nosinao! Ianao no tompon'ny #Topchef !!
Avy amin'i Edsel Little ny hajiantsary nampiasaina tao amin'ity lahatsoratra “Top Chef fundraiser” ity, nampiasaina tamin'ny alalan'ny Attribution-ShareAlike 2.0 Generic Creative Commons license. Tsidiho ny sary ao amin'ny Flickr an'i Edsel Little
4 andro izaySuriname